Macaashka Samsung ayaa hoos u dhacay 56% rubuca labaad ee sanadka | Wararka IPhone
Macaashka Samsung ayaa hoos u dhacay 56% rubuca labaad ee sanadka
Iibinta taleefannada gacanta ayaa hoos u dhacay sanadkii ugu dambeeyay xilligan la joogo waxay umuuqataa inay sii wadi doonaan sidaas, tan iyo suuqa ayaa bilaabay inuu muujiyo astaamaha saturation. Apple ayaa dhowr bilood ka hor shaacisay inay joojinayso shaacinta tirooyinka iibka ee iphone iyo ipad iyo mac labadaba, talaabadaas oo argagax dhalisay waxayna xaqiijisay in Apple aysan iibinayn sidii hore.
Apple ka sokow, mid kale oo ka mid ah dadka sida weyn ay u saameysay waa Samsung, ma ahan sababta oo ah waxay joojisay iibinta taleefannada casriga ah, taasoo ay sidoo kale sameysay inkasta oo ay sii wadayso inay kaalinta koowaad ka gasho qiimeynta adduunka, laakiin maxaa yeelay waa mid ka mid ah shirkadaha keena shirkadaha casriga ah, taas oo sababtay in bishii labaad ee isku xigta ay diiwaan geliyaan hoos u dhac dakhli.
Macaashka Samsung ayaa hoos u dhacay 56% sida ay ku dhawaaqday shirkadu inta lagu gudajiray rubuca labaad ee sanadka wax walbana waxay umuuqdaan inay muujinayaan inay sii wadi doonaan inay sidaas sameeyaan rubuca soo socda. Apple waxay siisay Samsung $ 683 milyan maalmo ka hor markii ay fulin weyday amarradii shaashadaha OLED ee ay ku ballanqaaday markii la bilaabay iPhone X.
Kuwaas oo gaaraya 683 milyan oo doolar waxay ku jiraan xisaabaadka ay Samsung soo gudbisay, taasoo ka caawisay shirkadda inay barkinta hoos u dhacdo faa iidada ay shirkaddu siisay rubuca labaad ee sanadka.
Samsung waa shirkadda ugu weyn ee ka kooban qaybaha taleefannada casriga ah, iyada oo loo marayo qaybteeda semiconductor, qaybaha ka kooban processor-yada illaa bandhigyada, iyada oo loo marayo xusuusta kaydinta, xusuusta RAM ... waana sidaas warshadaha waaweyn sida Huawei, Xiaomi iyo Apple inta badan.
Diidmada diidmada dowladda Mareykanka ee shirkadda Huawei ayaa u ogolaatay inuu iibiyo taleefannada casriga ah oo badan, laakiin dhanka kale, waxay kaloo aragtay sida amarada soo saarahaan ay si aad ah u yareeyeen isla markaana aysan usii socon xawaaraha ilaa iyo haatan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Macaashka Samsung ayaa hoos u dhacay 56% rubuca labaad ee sanadka
Naqshad wanaagsan, caabbinta biyaha dhammaadka sanadkan. Tani waxay noqon laheyd AirPods cusub